Fametahana karbida fanodinana indostrialy amin'ny fanapahana fitaovana vy
Mpanamboatra mpamokatra CBN sy PCD fanapahana fitaovana faniriana te hampitombo ny famokarany amin'ny ifantohanama- hafanana on faritra tena kely mba mampihena ny fahaverezan'ny hafanana ary manatsara a tady karbida dingana.
Ny mpanjifa dia nanome vatan'ny vy telozoro, ny lafiny tsirairay ~ 16.5 mm (0.65 santimetatra). Ny fampidirana karbida brazing fampidirana tsy maintsy tanterahina amin'ny telozoro mitovy 3 mm (0.11 santimetatra) amin'ny sisiny. Ny faritra fanafanana ny vatan'ny vy fitaovana dia 43 mm (1.69 santimetatra) OD x 25 mm (0.98 santimetatra) ny halavany. Ny rafitra fanamafisana DW-UHF-6kW-II dia nampiasaina hahatratra 1600 ° F (870 ° C) ary hamita ny fizotrany ao anatin'ny 8 segondra. Ny coil iray namboarina manokana dia nampifantoka ny hafanana tao amin'ny faritra fametahana karbida sy ny fotoana fohy nanatsarana.
DW-UHF-6kW-II rafitra fanafana fampidirana miaraka amina namboarina coil brazing coil dia nampiasaina mba hifanaraka amin'ny fepetra takiana.
Industry: Tools & Fitaovana
Sokajy Technologies Tags brazing, carbide brazing, Fikororohana ny karbide, fitaovana fanapahana karibonetra brazing, fampidirana fanapahana brazing, fitaovana fanapahana brazing, hf misosa, induction brazing, Fametahana karbida, fampidirana vy famonoana brazing, fampidirana brazing fitaovana fanapahana Post Fikarohana